၎င်းအတွက်ပစ္စည်းများချေမှုန်းရန်အလွန်အရေးကြီးသောအဆင့်ဖြစ်သည် ငါးအစာကျွေးခြင်း. ကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကုန်ကြမ်း၏မျက်နှာပြင်အကျယ်ကိုကျယ်စေပြီးအစာကြေဖျော်ရည်တွင်အစာ၏ပျော်ဝင်နိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်စေပြီးတိရိစ္ဆာန်၏အစာခြေခြင်းကိုတိုးပွားစေသည်။. ဤအတောအတွင်း, ပစ္စည်းများ၏အမှုန်အရွယ်အစားကိုအလွန်နောက်ပိုင်းတွင်အပြောင်းအလဲနဲ့အဆင့်အတွက်အရည်အသွေးနှင့်ရှုပ်ထွေးသြဇာလွှမ်းမိုးပါလိမ့်မယ်, ထိုကဲ့သို့သော granulation အဖြစ်. ကြိတ်ခွဲဖြစ်စဉ်ကိုအဘို့အကောင့်အဖြစ် 50%-70% ပေါင်းစပ်အမှုန့်အစာကျွေးရာတွင်စုစုပေါင်းပါဝါစားသုံးမှု၏, နှိမ်နင်းထိရောက်မှု, ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိ, ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ဆုံးဖြတ်သည်. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုတန်ဖိုးထားရန်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုအဖြစ်ယူမှတ်ကြသည်, ငါးအစာအရည်အသွေးနှင့်အစာ၏စျေးနှုန်း. ကြက်အစာနှင့်ကျွဲနွားအစာကျွေးရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောင်းဖူးကြိတ်ခွဲစက်သည်တိကျသောတိရိစ္ဆာန်အစာများ၏ကုန်ကြမ်းများကိုကြိတ်ခွဲနိုင်သည်, ထိုကဲ့သို့သောပြောင်းဖူးအဖြစ်, ငရုတ်သီးစိမ်း, အစေ့, ပဲမျိုးစုံ, ကိတ်မုန့်ကိုရိုက်ချိုးသည်, နှင့်အခြားပစ္စည်းများ. ကျွဲနွားကျွေးသောပြောင်းဖူးကြက်နှင့်ကြက်သားအသားအတွက်ကြိတ်ကြိတ်ခွဲခြင်းသည် cellulose ပစ္စည်းများကောင်းစွာကြိတ်ခွဲရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်ဆီများပါ ၀ င်သောပစ္စည်းများ. ဒါဟာအစားထိုးလို့မရဘူး ငါးအစာကျွေးစက် ရေပေါ်ငါးအစာကျွေးခြင်း၌တည်၏, ငါးအစာကျွေးခြင်းနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာကျွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်.
1. ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းသည် feed hopper မှတစ်ဆင့်ကြိတ်ခွဲနေသောအခန်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးဖန်သားပြင်၏အဖွင့်အရွယ်အစားကိုလျှော့ချသည်အထိထိန်းသိမ်းထားသည်။ , နှင့် flailing တူများအလွန်အစာရှောင်ခြင်း spinning နှင့်တစ် ဦး ဖောက်ထားမျက်နှာပြင်နီးစပ်ရှိပါတယ်.
2. လေစီး၏ drive ကိုအောက်မှာ, ကျိုးပဲ့သောအရာသည်အပြင်ဘက်အစွန်းရှိ rotor တစ်လျှောက်ရွေ့လျားနေသည်, သွားပန်းကန်နှင့်ဆန်ခါ, ထို့နောက်ကျိုးပစ္စည်းကြေမွနေသည်. ပြီးတာနဲ့မျက်နှာပြင်တွင်း၏အချင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမှုန်အရွယ်အစား, အစာကျွေးမှုန့်မျက်နှာပြင်ဖြတ်သန်းပါလိမ့်မယ်.
3. ပန်ကာမှ feed ကိုအမှုန်ဥတု, နှင့်ထုတ်ကုန်များကိုဆိုင်ကလုန်းမှတဆင့်လွင့ ်၍ အလုပ်လုပ်နေသောပန်ကာ၏စုတ်ယူခြင်းအောက်ရှိသိုလှောင်မှုအိတ်များထဲသို့ပို့ဆောင်သည်.